🔥Congratulations Henry for being Projects Top Sale of the month of July to August!🥳 🔥Congratulations Bruce for being Rental Top Sale & Hit Triple Target of the month of August!🥳 🤩We are proud to represent you as our Top Sales list and Keep up ...
~ Fair Price & Good Place ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12390 ) 🐓🐓 လူစည်ကားတဲ့နေရာ၊ သွားလာရလွယ်ကူတဲ့နေရာကို ရှာနေသူတို့အတွက်တင်ပေးပြန်ပါပြီနော်...... နေရာ - တာမွေ မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - တိုက်ခန်း အလွှာ ...
""" လယ်ယာမြေကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာမှာ တရားဝင်ဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ သိလိုပါတယ် """ ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ လယ်ယာမြေကို အရပ်စာချုပ်နဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေတာ ဓလေ့ တစ်ခုလိုဖြစ်နေ ပါတယ် ။ ပုံစံ ၇ ရှိသည်ဖြစ်စေ ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်တာ ...
🙏🏻 မင်္ဂလာပါရှင် 🙏🏻 🍀 မဟာအောင်မြေမြို့နယ် 🍀 ✍🏼 S ( 573 ) 🏠 အိမ် 👉 အရောင်း 👈လေး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် 🤗 🛣 ( 38 ) လမ်းမကြီးတင် ➡️ ( 81 x 84 ) ကြား 🔹 Master Room (5) ခန်း , မြေညီထပ် ( 1 ) ခန်း, Hallခန်းပါ 📏 ပေ ( 40 x 85 ) , ...
~ Good Apartment & Wide Sqft ~
~ Good Apartment & Wide Sqft ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12456 ) 🏩🏩 ယုဇနပလာဇာနားက ဧရိယာကျယ်တဲ့ ရှယ်တိုက်ခန်းလေးကို အငှားရော အရောင်းရော ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် 🏩🏩 နေရာ - တာမွေ မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - ...
အိမ်ရာဝင်းထဲမှာခေတ်မီလှပရကူးကန်ပါသော၃ထပ်တိုက်သစ်လေးရောင်းပါမည်။ New modern luxury home with swimming pool for sale at thingankyun township Price - 12000lakhs Mega ph - 095116541/09975198855 -------‐‐‐-------------------------- Land size - ...
Marketed by MEGA HOME Myanmar
🙏🏻 မင်္ဂလာပါရှင် 🙏🏻 🍀 မဟာအောင်မြေမြို့နယ် 🍀 ✍🏼 S ( 943 ) 🔹 မဟာမြိုင်ရပ်ကွက် 🏠 အိမ် 👉 အရောင်း 👈လေး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် 🤗 🛣 သိပ္ပံလမ်းမကြီးအနီး 📏 ပေ ( 40 x 60 ) , တောင်လှည့် 💸 သိန်း ( 3200 ) တန် 🏠 နံကပ် (2) ထပ် ...
🙏🏻 မင်္ဂလာပါရှင် 🙏🏻 🍀 ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် 🍀 ✍🏼 S ( 1109 ) 🏠 အိမ် 👉 အရောင်း 👈လေး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် 🤗 🛣 ( 71 ) လမ်းပေါ်တင် ➡️ ( 35 ) လမ်းမကြီးအနီး 🚸 ကျောင်းအနီး 🏥 ဆေးရုံအနီး 💁‍♀️ ဈေးအနီး 🔹 Master Room (6) ခန်း 📏 ပေ ( 33 x ...
~ ready to move ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12455 ) ရွာမကျောင်းလမ်းအနီးမှာရှိတဲ့ တိုက်ခန်းလေးကို Moom မှ Customer တို့ အတွင်တင်ပေးလိုက်တယ်နော်.... နေရာ - လှိုင် မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - တိုက်ခန်း အလွှာ - ...
Check this url: https://www.lotayaproperty.com/property-for-sale